DHUUSAMAREEB - Madaxa xukuumadda Galmudug, Sheekh Maxamed Shaakir ayaa magaaladda Dhuusamareeb uu kulan gaar ah kula yeeshay saraakiil ka socotay Wasaaradda Gaashaandhiga Mareykanka, qaybta Qaaradda Afrika.
Kulanka oo ay goobjoog ahaayeen xubno ka tirsan Galmudug oo ay kamid yihiin Xilldhibaano waxaa diiradda lagu saarey arrimo ku saabsan amniga iyo sidii loo dar-dargelin lahaa howlgalada ka dhanka ah xoogaga Al-Shabaab ee degaanaddaas ku sugan.
Agaasimaha Madaxtooyadda ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug oo kulanka kadib la hadlay warbaahinta ayaa daboolka ka qaaday in saraakiisha Mareykanka ay balanqaadeen inay ka taageeri doonan maamulka la dagaalanka Shabaab.
Wuxuu intaas ku daray in leysla meel-dhigay in ciidamadda sida gaarka ah u tababaran ee loo yaqaan Danab ee hoos-taga Taliska Mareykanka ee Soomaaliya ay xarumo ciidan ka sameystaan degaanada Galmudug, gaara ahaan magaalada Dhuusamareeb.
Madaxa xukuumadda Galmudug, Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa gudaha garoonka diyaaradaha Dhuusamareeb uu kulan gaar ah kula yeeshay saraakiil ka socotay Wasaaradda Gaashaandhiga Mareykanka, qaybta Qaaradda Afrika.
Agaasimaha Madaxtooyadda ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug oo kulanka kadib la hadlay warbaahinta waxa uu daboolka ka qaaday in saraakiisha Mareykanka ay balanqaadeen inay ka taageeri doonan maamulka la dagaalanka Shabaab.
Wuxuu intaas ku daray in leysla meel-dhigay in ciidamadda sida gaarka ah u tababaran ee loo yaqaan Danab ee hoos-taga Taliska Mareykanka ee Soomaaliya ay xarumo ciidan ka sameysan doonan degaanada Galmudug, gaara ahaan Dhuusamareeb.
Mareykanka oo Saldhig ka furanaya Dhuusamareeb [Ujeedka]
Soomaliya 06.12.2018. 08:26
Galmudug ayaa kamid ah meelaha sida gaarka ah uu Mareykanka howlgallada uga...
Al-Shabaab-ka Galgaduud oo loo hanjabey
Soomaliya 06.09.2018. 14:02
Taliyaha ciidamada Mareykanka ee Africa oo soo gaarey Muqdisho [Sawirro]
Afrika 28.11.2018. 10:13
Soomaaliya: Barlamaanada Galmudug iyo Ahlusuna oo la isku daray
Soomaliya 27.03.2018. 00:27
Mareykanka oo soo bandhigay sababaha Dowladda Somalia ugu fashilantay dagaalka Al-Shabaab
Soomaliya 03.02.2019. 12:28
Mareykanka oo Duqeyn diyaaradeed ka fuliyay gobolka Baay [Khasaaraha]
Soomaliya 01.12.2018. 19:09
Sarkaal Mareykanka ah oo ku dhintay Howlgal ka dhacay Soomaaliya
Soomaliya 12.03.2019. 15:02
Qoor Qoor oo gaare magaalada Gaalkacay 30.05.2020. 19:46
Aabe lagu tuhmay Al-Shabaab iyo labadiisa caruur oo la khaarijiyey 30.05.2020. 13:30
Ciidamo Itoobiyaan ah oo lagu weeraray koonfurta Soomaaliya 30.05.2020. 11:35
Madaxda DF oo lagu dhaliilay in aysan ka hadlin dil wadareedkii Gololey 30.05.2020. 11:05
Dhimashada iyo kiisaska Coronavirus ee Somaliland oo sarre u kacday 30.05.2020. 10:30
Kiisaska Coronavirus Puntland oo ku dhow in ay gaaraan 200 30.05.2020. 09:40